डल्फिनका प्रडक्ट : उत्कृष्ट र आकर्षक त्रिवेणी गु्रप अन्तर्गत त्रिवेणी प्लाष्ट पोलिमर्स प्रालि ‘डल्फिन’ १९९८ देखि निरन्तर बजारमा छ । गुणस्तरलाई ध्यान दिदैं कम्पनीले विभिन्न आकर्षक मोडलमा प्लाष्टिकका टेबल, कुर्सीलगायतका आफ्नो प्रोडक्टहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । डल्फिन’ नेपालमा प्लाष्टिकको कुर्सी उत्पादन गर्ने पहिलो कम्पनीको रूपमा परिचित ब्राण्ड हो । गुणस्तरिय र लामो समय टिक्ने भएकोले मार्केटका अन्य प्लाष्टिकका सामानहरूमध्ये अग्रस्थानमा पर्दछ
मुस्कान इन्टरप्राइजेज : नेपाली पहिचान र संस्कृति झल्किने उत्पादनमा अब्बल बन्दै बद्लिदो सामाजिक जीवनशैलीसँगै आफ्नो घरको सजावटमा पनि मानिसहरुले ध्यान दिन थालेको छन् । मानिसहरू ब्राण्ड/क्वालिटी कन्सस हुँदैछन् । त्यस्तै ब्रान्ड र क्वालिटी चाहाने ग्राहकहरूका लागि मुस्कान इन्टरप्राइजेज उत्कृष्ट विकल्प बनेको छ । यहाँ होम डेकोरका विभिन्न सामानहरू उत्पादन हुँदै आएका छन् । मुस्कान इन्टरप्राइजेज सन् २००७ मा मेरी आमाले शुरू गर्नुभएको हो । तत्कालिन समयमा उहाँले
प्रोडक्ट रिभ्यूः क्लासिकका म्याट्रेस विदेशीभन्दा उत्कृष्ट र आकर्षक नेपाली उत्पादन विदेशी उत्पादनभन्दा कम छैन भन्ने बलियो उदाहरण हो क्लासिक म्याट्रेस । नेपालमा पहिलोपटक गुणस्तरिय फाइवर प्लान्टका क्वायरहरु प्रयोग गरेर अर्थात् गुणस्तरिय म्याट्रेस उत्पादकको रूपमा यस कम्पनी स्थापित छ । बाँसबारी काठमाडौंदेखि सिमरासम्मको यात्रा क्लासिक इन्डष्ट्रिजको स्थापना ई.सं. १९९० मा करिष्मा क्लासिक कन्जुमर प्रोडक्टको रूपमा भएको हो । कम्पनीले स्थापना कालमा काठमाडौं उपत्यकाका पर्यटकीय
फर्निवर्ल्ड : उत्कृष्ट ब्राण्ड, फेन्चाईजमा जाने योजना नेपालमा गुणस्तरिय र उत्कृष्ट फर्निचरको अभावलाई फर्निवर्ल्डले पुरा गरिदिएको छ । एउटा विश्वास, उत्कृष्टता, गुणस्तर, आकर्षक, आफ्टर सेल्स सर्भिसका लागि योग्य ब्राण्ड फर्निवर्ल्डको नाम सम्झन्छन् । बजारमा क्वालिटी, कम्पेटेटिभ प्राइज र आफ्टर सेल सुविधाका मूख्य विशेषताले एउटा उत्कृष्ट पहिचानबनाइसकेको छ । जोरपाटी र वानेश्वरबाट रिटेल सोरुमबाट शुरु भएको व्यवसाय ग्राहकहरुको मागअनुसार थप अन्य ठाउँमा पनि
मनकामना केबलकार सञ्चालन मुग्लिन / मर्मतसम्भारका लागि गत भदौ २२ गतेदेखि बन्द गरिएको मनकामना केबलकार सेवा आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । मनकामना दर्शन प्रालिले सञ्चालन गरेको केबलकार मूलह्वील लिनर चेन्जिङ, मेन मोटर सर्भिसिङ तथा रोप रिङस्प्लिसिङलगायतको मर्मतका लागि भदौ २२ देखि २६ गतेसम्म पाँच दिन बन्द गरिएको थियो । आज बिहानदेखि पुनः नियमित सञ्चालनमा आएको मनकामना दर्शन प्रालिका
आरोन फर्निचर : अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्पादन अब नेपाली बजारमा नेपालको जीवनशैली बद्लिदो छ । शहरीकरण बढ्दो छ । फर्निचर तथा फर्नेक्सका समान प्रयोग दैनिक बृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा आवश्यक अधिकतम् सामान आयातित छन् । जसले नेपाली पैसा विदेशिएको मात्र छैन । यहाँ युवाको श्रम र सीप खेर गएको छ । आरोन फर्निचर यहि आवश्यकता पूरा गर्न जन्मिएको हो । विशेष गरी शहरका मध्यमदेखि उच्च
एक्जोटिका फर्निचरमा ५० प्रतिशतसम्म छुट अफर शहरीकरण र विलासी जीवनशैलीका कारण बजारमा नयाँ नयाँ डिजाइनका फर्निचरजन्य सामग्रीहरु उपलब्ध छन् । यसैबीचमा दुई वर्षअघि सञ्चालनमा आएको एक्जोटिका फर्निचरले पनि पछिल्लो समय राम्रो बजार लिन सफल छ । रिजनल मूल्यमा उत्कृष्ट प्रडक्ट दिने मूख्य उद्देश्य हो । बजारको माग अनुसार एक्स्ट्रा डिजाइनमा रेडिमेट फर्निचर उपलब्ध गराउँछौं । ट्रिटमेन्ट गरिएको उत्कृष्ट काठबाट बनेको जुन भारतमै
निरन्तर ओरालो लाग्दै सुनको भाउ, आज कति घट्यो ? हेर्नुस् काठमाडौं / साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ पुनः ओरालो लागेको छ । बिहिबार दुई सय घटेर ७० हजार ८ सयमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुन शुक्रबार प्रतितोला ७० हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । आज पनि सुनको भाउ तोलामा दुई सयले घटेको हो । त्यस्तै, तेजावी सुन समेत आज तोलाको दुई सय घटेर
आज अमेरिकी डलरदेखि कुवेती दिनारसम्मको मूल्य कति छ ? हेर्नुस् विनिमयदर काठमाडौं / नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारको विदेशी मुद्रा विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ । त्यसैगरि बुधबार युरोपियन युरो एकको खरिददर १२५ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर १२५ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ । कतारी रियाल
स्वास्थ्यका लागि रमाइलो “टिभिएस दशैंको दौड” हुने काठमाडौं / नेपालको लागि टिभिएस टू–ह्वीलर्सको एक मात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रा.लि.ले स्वास्थ्यका लागि रमाइलो “टिभिएस दशैंको दौड” गर्ने भएको छ । टिभिएसको उपभोक्ता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त योजनामा सबैलाई दौडमा निःशुल्क भाग लिने अवसर दिएको छ । टिभिएस शोरुममा नगइकनै वा टिभिएस बाइक नकिनेर पनि सहभागी बन्न पाइने गजबको अफर रहेको यस योजनाको एक
पियाजियो एपे सिटि डिलक्स सार्वजनिक, यस्तो छ विशेषता विरगञ्ज / पियाजियो एपे सिटि डिलक्स नेपालमा सार्वजनिक भएको छ । एमभि दुगड़ ग्रुपको आयोजनामा विरगञ्जमा एक भव्य समरोहकाबिच पियाजियो थ्री ह्विलर्सको नयाँ मोडल पियाजियो एपे सिटि डिलक्सको उद्घाटन सम्पन्न भएको हो । उक्त कार्यक्रम पियाजियो भेइकल्स इण्डियाका उपाध्यक्ष सुधान्सु अग्रवाल, एक्सर्पोट मेनेजर दिपककुमार, पियाजियोका हेड अफ अपरेशन विजय महतो र दुगड़ ब्रदर्स एण्ड सन्स्का
मनिग्रामद्वारा प्रवद्र्धन योजनाका विजयीहरु पुरस्कृत, दशैं तिहार लक्षित नयाँ योजना घोषणा काठमाडौं / विश्वव्यापी मनिट्रान्सफर तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक मनिग्रामले नेपालमा सञ्चान गरेको विशेष प्रवद्र्धन योजनाका विजयीहरुलाई पुरस्कृत गरेको छ । मेदेखि जुलाई महिनासम्म सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत मनिग्रामका ग्राहकहरुलाई उनीहरुका कारोबार रकम हेरक हप्ता दोब्बर पार्ने अवसर प्रदान गरिएको थियो । यसका साथै कार्यक्षेत्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स सेवाप्रदायक संस्था भएको मनिग्रामले दशैं तिहारलक्षित नयाँ योजना सार्वजनिक
बहुप्रतिक्षित टाटा एच फाइभ एसयूभी विराटनगरमा सार्वजनिक विराटनगर / नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि. ले बहुप्रतिक्षित तथा चर्चित प्रिमियम एसयूभी टाटा एच फाइभ गोएल मोटर्स प्रा. लि. मार्फत विराटनगरमा सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय बजारमा टाटा ह्यारियर भनिने टाटा एचफाइभको मूल्य नेपाली बजारमा शुरुवाती मूल्य ५६,५५०००/– (छपन्न लाख पच्पन्न हजार रुपैंया) तोकिएको छ । नेपाली बजारमा टाटा
भायनेटको नयाँ अफर : दशै तिहार TV को उपहार काठमाडौं / भायनेट कम्युनिकेसन्स्ले नयाँ अफर ल्याएको छ । यही भदौ २६ गतेदेखि दशैँ र तिहारलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो ग्राहकहरुको लागि ‘भायनेट दशैं तिहार TV को उपहार’ नामक नयाँ अफर ल्याएको हो । यस अफरअन्तर्गत भायनेटका ग्राहकहरुले अतिरिक्त स्पिडको इन्टरनेट र २३० भन्दा बढी च्यानल भएको NETTV को साथ SKYWORTH को ३२ र ४० इन्च
सुनको भाउ तोलामा दुई सय घट्यो, कति छ आज ? काठमाडौं / बिहिबार सुनको भाउ तोलाको दुई सयले घटेको छ । बुधबार प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुन आज ७० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, आज तेजावी सुन तोलाको ७० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । तेजावी सुन पनि आज तोलाको दुई